NYI LYNN SECK 18+ DEN: Men are from Mars and Women are from Venus
One of the biggest differences between men and women is how they cope with stress. Men become increasingly focused and withdrawn while women become increasingly overwhelmed and emotionally involved. At these times,aman's needs for feeling good are differ ent fromawoman's He feels better by solving problems while she feels better by talking about problems. Not understanding and accepting these differences creates unnecessary friction in our relationships.
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်နေရင်းနဲ့ မှန်လှချည်လားလို့ ထောက်ခံလာရတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ယောက်ျားတွေနဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ သဘာဝတွေကို ဖှောပြ အဖြေရှာပေးထားတဲ့ နာမည်ကြီး စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ အဆင်ပြေစေဖို့ အများကြီး အထောက်အကူ ရပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ မိန်းမတွေ မှန်သမျှကို ဒီစာအုပ် လှိမ့်ဖတ်စေချင်တာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတာတော့ ပြောမရပါဘူး။ ဖတ်လိုက်မှ ကျွန်တှော ဆိုလိုတာ သိမှာပါ။
Download : Men Are From Mars And Women Are From Venus [443Kb][Pdf]
Technorati Tags: Men are from Mars and Women are from Venus, Download, Ebook
Posted by NLS at 9/02/2006 03:51:00 AM
No response to “Men are from Mars and Women are from Venus”